Imisebenzi eyi-500,000 yasehotele yaseMelika ayizukubuya emva kokuphela konyaka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Imisebenzi eyi-500,000 yasehotele yaseMelika ayizukubuya emva kokuphela konyaka
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ingeniso yegumbi lehotele iya kuba phantsi kwe- $ 44 yezigidigidi kulo nyaka xa kuthelekiswa ne-2019.
Ngaphezulu kweminye kwimisebenzi emihlanu yehotele ethe ngqo yalahleka ngexesha lobhubhane.
Ukuhlala ehotele kulindelwe ukuba kwehle amanqaku eepesenti ezilishumi kumanqanaba e-2019.
Amazwe kunye neendawo ziya kube zilahlekelwe ngaphezulu kwe- $ 20 yezigidigidi kwingeniso yerhafu engafezekiswanga evela kwiihotele kule minyaka mibini idlulileyo.
Phakathi ku-2021, ingxelo entsha kunye nokulahleka kwemisebenzi kurhulumente ekhutshwe ngu Umbutho weAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA) Fumanisa ukuba ngelixa uhambo lokuzonwabisa luqala ukubuya, indlela yomzi mveliso wehotele yokubuyela kwimeko yesi sifo inde kwaye ayilingani, kwaye iimarike zasezidolophini zichaphazele ngokungafaniyo.
Uqikelelo lweshishini luphucukile ukusukela ngoJanuwari kunye nokunyuka kokuzonwabisa, kodwa eli shishini lihlala lingaphantsi kwinqanaba lobhubhane.
Iziphumo eziphambili zibandakanya:
Ngaphezulu kwesinye kwisihlanu kwimisebenzi ethe ngqo yehotele elahlekileyo ngexesha lo bhubhane-phantse i-500,000 iyonke-ayizukubuya ekupheleni konyaka.
Iziphumo zifika njenge-AHLA kunye noMbutho wabanini beehotele zaseAsia American ibambe iNgqungquthela yeNtsebenzo eyiNtloko (nge-20-22 kaJulayi), apho iihotele ezivela phantse kuwo onke amazwe kwilizwe liphela zicwangciselwe ukudibana namalungu eCongress ukuze babelane ngendlela i-COVID-19 eyiphembelele ngayo ishishini. kwaye ubize uncedo olongezelelekileyo ngokubongoza iCongress ukuba:
I-Cosponsor kwaye upasise i-Save Hotel Jobs Act (S. 1519 / HR3093)
I-Cosponsor kunye nokupasa amatyala ukumisela amaxabiso afanelekileyo kwidemokhrasi (HR2104 / S. 2160)
Nceda unikeze abanini beehotele ufikelelo kwiNtlawulo yeRhafu yokuGcina abasebenzi, okwangoku engabandakanyi uninzi lweehotele
“Ngaphandle kokuphakama kukhenketho, phakathi ku-2021 sisabona ukuba indlela yokubuyela kwimeko entle kwiihotele zaseMelika inde kwaye ayilingani. Ezi ziphumo zibonisa ukonakala kwezoqoqosho okusajongene neemarike zeehotele kwaye kugxininisa isidingo senkxaso ekujoliswe kuyo evela kwiCongress kubasebenzi basehotele nakumashishini amancinci, utshilo uChip Rogers, umongameli kunye neCEO yeAHLA. “Iihotele kunye nabasebenzi bazo babonakalise ukomelela okungaqhelekanga xa bejamelene nemiceli mngeni yoqoqosho engazange ibonwe ngaphambili, kodwa nokuba yiSave Hotel Jobs Act, ireyithi efanelekileyo yedemem, okanye ukwandisa umngxunya kwiNtlawulo yeRhafu yokuGcina abasebenzi, sifuna uncedo lweCongress endleleni ukuchacha ngokupheleleyo. Yiyo loo nto eli shishini limanyene emva kweNtlanganiso yezeNtsebenzo. ”
I-COVID-19 sesona siganeko soqoqosho sibi kakhulu kwimbali yehotele yaseMelika. Ngelixa ukonyuka kutsha nje kukhenketho lwasehlotyeni lukhuthaza, ukhenketho lwamashishini nolwamaqela, owona mthombo mkhulu wengeniso kushishino, luya kuthatha ixesha elide ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukuhamba kweshishini kuyehla kwaye akulindelwanga ukuba kubuyele kumanqanaba e-2019 de kube ubuncinci ngo-2023 okanye ngo-2024. Imisitho emikhulu, iintlanganiso kunye neentlanganiso zeshishini nazo sele zirhoxisiwe okanye zamiswa de kwangama-2022.
Ngaphandle kokuba yenye yezona ndawo zithintelwe kakhulu ngulo bhubhane, iihotele kuphela kwenxalenye yeshishini lokubuk 'iindwendwe kunye nezolonwabo okwangoku ukufumana uncedo oluchanekileyo olunxulumene ne-COVID
Iintlola ngoku zamkelwe kwiNdibano kaWonke-wonke ye-UNWTO...
Uphononongo olutsha lwesitofu sokugonya umhlaza e-China Yaziswa